ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးခြေလေးချောင်းပါစက်ရုပ် တရုတ်ထုတ်ဖော်ပြသ - People Media Myanmar
Home ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးခြေလေးချောင်းပါစက်ရုပ် တရုတ်ထုတ်ဖော်ပြသ
စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလော်ဂျစ်စတစ်နှင့် ကင်းထောက်စစ်ဆင်ရေးများတွင် အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အတွက် အီ လက်ထရစ်ကယ်စွမ်းအင်သုံး ခြေလေးချောင်းပါသော ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစက်ရုပ်ကို တရုတ်နိုင်ငံက မိတ်ဆက် ထုတ်ဖော်ပြသလိုက်သည်။
စာမရီပုံသဏ္ဍန်ရှိ ခြေလေးချောင်းပါသောစက်ရုပ်သည် ၃၅၂ ပေါင် (၁၆၀ ကီလိုဂရမ်) သယ်ဆောင်နိုင်ပြီး တစ် နာရီလျှင် ၆ မိုင် (၁၀ ကီလိုမီတာ) ပြေးလွှားနိုင်သည်။
ခေတ်မီအထောက်အပံ့အသုံးအဆောင်များမရသည့် စစ်ဆင်ရေးမျိုးတွင် ကြံ့ကြံ့ခံဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အဆိုပါ စက်ရုပ်ကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ချောက်ကမ်းပါးများ၊ ဆက်သွယ်ရေးမြောင်းများ၊ မြက် ရိုင်းတောများ၊ ကွင်းပြင်များ၊ သဲကန္တာရများ၊ နှင်းတောများနှင့် ရွှံ့ညွန်ထူထပ်သောလမ်းများအပါအဝင် မြေ မျက်နှာသွင်ပြင်အမျိုးမျိုးတွင် သွားလာလှုပ်ရှား စစ်ကစားနိုင်ကြောင်းသိရသည်။
လေးလံပြီး အကြီးမားဆုံးခြေလေးချောင်းပါ စက်ရုပ်ဖြစ်သော်လည်း အဆင့်မြင့်နည်းပညာများဖြင့်တည်ဆောက် ထားသော ယင်းစက်ရုပ်သည် ပြေးလွှားခြင်း၊ ခုန်ပေါက်ခြင်း၊ ပြန်လှည့်ခြင်း၊ ထောင့်ဖြတ် (ဓားလွယ်ခုတ်) လမ်း လျှောက်နိုင်ခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
အစိတ်အပိုင်းအစုအဝေး ၁၂ မျိုးပါရှိပြီး ခေတ်အမီဆုံးသော အာရုံခံစနစ်များတပ်ဆင်ထားသည့် အဆိုပါစက်ရုပ် သည် နည်းဗျူဟာမြောက်စစ်ဆင်ရေးသတင်းအချက်အလက်များရယူနိုင်သည့်အပြင် လော်ဂျစ်စတစ်တာဝန် များကိုလည်းထမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်း တရုတ်အစိုးရပိုင် CCTV ရုပ်သံဌာနက ကြေညာသွားသည်။
အန္တရာယ်များလွန်းလှသည့် တိုက်ခိုက်ရေးဇုန်များတွင်ဆောင်ရွက်သော ရာသီမရွေးစစ်ဆင်ရေးများ၊ ဝေးလံခေါင် ဖျားအရပ်ဒေသများတွင် ဆောင်ရွက်သည့်စစ်ဆင်ရေးများ၊ စစ်သည်များအတွက် စိန်ခေါ်မှုများအလွန်အမင်း များပြားလှသော ရှုပ်ထွေးလှသည့်အခြေအနေများတွင် ယင်းစက်ရုပ်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
ယခုထုတ်ဖော်ပြသလိုက်သော စက်ရုပ်အသစ်အပြင် ဇီဝစက်မှုနည်းပညာဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီး Geda ဟု အမည် ပေးထားသော ခွေးစက်ရုပ်တစ်ရုပ်လည်း တရုတ်နိုင်ငံတွင်ရှိသည်။ ယင်းခွေးစက်ရုပ်မှာ ၃၂ ကီလိုဂရမ် (၇၀. ၅ ပေါင်) အလေးချိန်ရှိပြီး သယ်ဆောင်နိုင်သည့် အလေးချိန်မှာ ကီလိုဂရမ် ၄၀ (၈၈.၁ ပေါင်) ဖြစ်သည်။
ယင်းခွေးစက်ရုပ်မှာ လူ့အသံဖြင့် အမိန့်ပေးသည်ကို နားလည်ပြီး လူမျက်နှာကို မှတ်မိနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ယင်းခွေး စက်ရုပ်ကို တောအုပ်များ၊ ကျောက်တောင်များ၊ လမ်းကျဉ်းများနှင့် တစ်ကိုယ်စာဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်သည့် တံ တားများကို ဖြတ်ကျော်ခိုင်းရင်း စမ်းသပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
Ref: China Unveils ‘World’s Largest’ Quadruped Military Robot
စဈဘကျဆိုငျရာလောျဂစြျစတဈနှင့ျ ကငျးထောကျစဈဆငျရေးမြားတှငျ အထောကျအကူပွုနိုငျရနျအတှကျ အီ လကျထရဈကယျစှမျးအငျသုံး ခွလေေးခြောငျးပါသော ကမ္ဘာ့အကွီးဆုံးစကျရုပျကို တရုတျနိုငျငံက မိတျဆကျ ထုတျဖောျပွသလိုကျသညျ။
စာမရီပုံသဏ်ဍနျရှိ ခွလေေးခြောငျးပါသောစကျရုပျသညျ ၃၅၂ ပေါငျ (၁၆၀ ကီလိုဂရမျ) သယျဆောငျနိုငျပွီး တဈ နာရီလြှငျ ၆ မိုငျ (၁၀ ကီလိုမီတာ) ပွေးလှှားနိုငျသညျ။
ခတျေမီအထောကျအပံ့အသုံးအဆောငျမြားမရသည့ျ စဈဆငျရေးမြိုးတှငျ ကွံ့ကွံ့ခံဆောငျရှကျနျိုငျရနျ အဆိုပါ စကျရုပျကို ဒီဇိုငျးရေးဆှဲတညျဆောကျထားခွငျးဖွဈပွီး ခြောကျကမျးပါးမြား၊ ဆကျသှယျရေးမွောငျးမြား၊ မွကျ ရိုငျးတောမြား၊ ကှငျးပွငျမြား၊ သဲကန်တာရမြား၊ နှငျးတောမြားနှင့ျ ရှှှှှှှှှှှံ့ညှနျထူထပျသောလမျးမြားအပါအဝငျ မွေ မကြျနှာသှငျပွငျအမြိုးမြိုးတှငျ သှားလာလှုပျရှား စဈကစားနိုငျကွောငျးသိရသညျ။
လေးလံပွီး အကွီးမားဆုံးခွလေေးခြောငျးပါ စကျရုပျဖွဈသောျလညျး အဆင့ျမွင့ျနညျးပညာမြားဖွင့ျတညျဆောကျ ထားသော ယငျးစကျရုပျသညျ ပွေးလှှားခွငျး၊ ခုနျပေါကျခွငျး၊ ပွနျလှည့ျခွငျး၊ ထောင့ျဖွတျ (ဓားလှယျခုတျ) လမျး လြှောကျနိုငျခွငျးမြားကို ပွုလုပျနိုငျစှမျးရှိသညျ။
အစိတျအပိုငျးအစုအဝေး ၁၂ မြိုးပါရှိပွီး ခတျေအမီဆုံးသော အာရုံခံစနဈမြားတပျဆငျထားသည့ျ အဆိုပါစကျရုပျ သညျ နညျးဗြူဟာမွောကျစဈဆငျရေးသတငျးအခကြျအလကျမြားရယူနိုငျသည့ျအပွငျ လောျဂစြျစတဈတာဝနျ မြားကိုလညျးထမျးဆောငျနိုငျကွောငျး တရုတျအစိုးရပိုငျ CCTV ရုပျသံဌာနက ကွညောသှားသညျ။
အန်တရာယျမြားလှနျးလှသည့ျ တိုကျခိုကျရေးဇုနျမြားတှငျဆောငျရှကျသော ရာသီမရှေးစဈဆငျရေးမြား၊ ဝေးလံခေါငျ ဖြားအရပျဒသေမြားတှငျ ဆောငျရှကျသည့ျစဈဆငျရေးမြား၊ စဈသညျမြားအတှကျ စိနျခေါျမှုမြားအလှနျအမငျး မြားပွားလှသော ရှုပျထှေးလှသည့ျအခွအေနမြေားတှငျ ယငျးစကျရုပျကို အသုံးပွုနိုငျသညျ။
ယခုထုတျဖောျပွသလိုကျသော စကျရုပျအသဈအပွငျ ဇီဝစကျမှုနညျးပညာဖွင့ျထုတျလုပျပွီး Geda ဟု အမညျ ပေးထားသော ခှေးစကျရုပျတဈရုပျလညျး တရုတျနိုငျငံတှငျရှိသညျ။ ယငျးခှေးစကျရုပျမှာ ၃၂ ကီလိုဂရမျ (၇၀. ၅ ပေါငျ) အလေးခြိနျရှိပွီး သယျဆောငျနိုငျသည့ျ အလေးခြိနျမှာ ကီလိုဂရမျ ၄၀ (၈၈.၁ ပေါငျ) ဖွဈသညျ။
ယငျးခှေးစကျရုပျမှာ လူ့အသံဖွင့ျ အမိန့ျပေးသညျကို နားလညျပွီး လူမကြျနှာကို မှတျမိနိုငျစှမျးရှိသညျ။ ယငျးခှေး စကျရုပျကို တောအုပျမြား၊ ကြောကျတောငျမြား၊ လမျးကဉြျးမြားနှင့ျ တဈကိုယျစာဖွတျသနျးသှားလာနိုငျသည့ျ တံ တားမြားကို ဖွတျကြောျခိုငျးရငျး စမျးသပျခဲ့ကွောငျးသိရသညျ။
« အိပ်က်ကာလီဘာ Excalibur အမြောက်ကျည် စံချိန်တင်အကွာအဝေးရောက်ရှိ
ချောင်းဦးမြို့နယ်၊ သုံးပန်လှရွာရှိ လူငယ်မေတ္တာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအသင်း၏ ယာဉ်တစ်စီး လူနာသွားရောက် ခေါ်ယူစဉ် လမ်းခရီး၌ ပျောက်ဆုံးနေ »